Budata Shazam maka Windows
Free Budata maka Windows (8.00 MB)
Niji nde 15 na -arụ ọrụ kwa ụbọchị, Shazam bụ ụzọ kachasị ọsọ na kachasị mfe iji chọpụta egwu ọhụrụ. Ngwa egwu a ma ama, nke nweere onwe ya kpamkpam, na -amata egwu a na -akpọ ugbu a nime obere oge ma nyere gị aka ịmụta aha egwu ị na -achọ ịmata. Ihe ị ga - eme bụ imepe ngwa Shazam wee pịa akara ngosi Shazam. Ọ dị nfe na ịchọta egwu ị na -achọ.
Site na Shazam, nke na -achọta egwu a na -akpọ nazụ dị ka sekọnd ole na ole, ị nwere ike zụta egwu ahụ ngwa ngwa, chọgharịa vidiyo YouTube, ma kesaa mkpado na netwọkụ mmekọrịta. Na mgbakwunye na ndị a, ị nwere ike gụọ nyocha album na akụkọ ndụ nke ndị ọbụ abụ kachasị amasị gị, wee chọpụta egwu ọhụrụ site na ịgagharị egwu ndị ọrụ Shazam ndị ọzọ gere.
Ọ ga -ekwe omume iji Shazam mgbe ngwa ọzọ mepere emepe ma ọ bụ mgbe ị na -achọgharị ịntanetị. Ị nwere ike ime nke a site na njirimara Snap View nke Windows 8. Ngwa nchọta egwu a, nke na -arụ ọrụ na kọmpụta Windows 8 na mbadamba yana ngwaọrụ nwere Windows 8.1, bara uru nke ukwuu yana onye chọrọ ịbụ onye so na ngwa ndabara.
Nha faịlụ: 8.00 MB
Mmepụta: Shazam Entertainment
Kacha ọhụrụ na: 09-08-2021